Lalao Retro 12 maimaim-poana ho an'ny Android navoaka tamin'ity taona ity | Androidsis
Amin'ity taona ity dia manana hatrany isika kalitao be dia be amin'ny lalao video izay mivoaka any amin'ny Google Play Store ary ny paozisialy Retro pixel dia mbola manome ny habeny ho fiteny famolavolana tsara indrindra ka tsy hiteraka fandaniana be ny batery terminal. Midika izany fa afaka manohy manome kalitao tsara amin'ny sary ianao fa aza manery ny fizakan-tena ao amin'ny terminal, toy ny hoe mitranga amin'ireo lalao 3D izay matetika manana sary mahatalanjona, fa maka ny fiainana bateria aloha nefa tsy ho tsapanao akory.
Anisan'ireo lalao video nofidiko ireo 12 handray izany ny tsara indrindra amin'ny kanto Retro sy pixel amin'ny efijery misy ny findainao. Ny iray amin'ireo kalitaony dia ny fahafahany maimaimpoana amin'ny maodelim-freemium, koa mety ho hitanao fa misy dokam-barotra ao anatin'ilay fampiharana. Asongadiko ihany koa i Nitrome, izay misy maromaro ao anatin'io lisitra io satria iray amin'ireo efitrano fianarana izay miloka indrindra amin'ny fomba kanto pixel sy ny sokajy isan-karazany avy amin'ny clickers, platform, defense tower na koa tranomaizina.
1 Fanafihana lozam-by
2 Hammer Baomba
3 Mpanenjika lanitra
5 Ilay mpitandrina fikatsahana
6 Ady maika
7 Tenisy Tap iray
8 Fiaran-dalamby mandeha
9 Super volombava
10 Elvin: Ny sehatry ny rano
11 Tsindrio Knight sy ny Castle maizina
12 dingana Day
Ny ohatra ambony amin'ny kanto pixel amin'ity lisitra ity dia ity avy amin'ny SNK antsoina hoe Fanafihana lozam-by ary inona izany franchise fantatra tokoa. Fiarovana tilikambo izay tsy maintsy hametrahanao ny tafika isan-karazany handalovana ny ambaratonga ary hahazoanao fanapahana manerantany. Toa tsara amin'ny multiplayer ho an'ny ady an-tserasera ny milalao mpilalao 4 miaraka.
METAL SLUG HOTAFIHINA
Developer: CORPORATION SNK
Navoaka ny Lalao Crescent Moon mahafinaritra ity lalao video ity trano-maizina olona voalohany izay tsy mitovy amin'ny ambin'ity sokajy ity amin'ny alàlan'ny fahafahanao milentika haingana amin'ny lalao vitany. Sarin-tsarimihetsika Pixel ho an'ny karazana fahavalo rehetra sy tranomaizina isan-karazany izay hahatonga anao tsy ho antenaina. Iray amin'ireo fanampiana tsara indrindra ho trano-maizina hatreto amin'ity taona ity.
Toy ny milalao isika videogame avy amin'ny iray amin'ireo sarimihetsika sarimihetsika an'ny Studio Ghibli, Sky Chasers dia hametraka anao eo alohan'i Max sy ny boaty baoritra manokana fa tsy maintsy ho fantatrao ny fomba fitondrana hiditra amin'ireo tontolo majika ireo. Lalao video mampihomehy izay amin'ny voalohany dia mety ho toa mora nefa manampy fahasahiranana rehefa lalaovina.
Nitrome no mitondra antsika trano-maizina vaovaony izay ny trano-maizina voaforona kisendrasendra ary ankoatran'io kalitao tena tsara io dia afaka manavaka azy amin'ny karazana fandrika sy biby goavambe izy. Lalao mahazatra ho an'ny lalao haingana izay hiatrehanao amin'ireo ohatra tsara tarehy indrindra mifandraika amin'ny zavakanto pixel. Fahagagana kely fotsiny.
Ilay mpitandrina fikatsahana
Trano-maizina hafa izay ampiasana fomba sary miharihary sy tsara kalitao mba hitondrana antsika taloha Karazana tranomaizina 10 fa ny tsirairay amin'izy ireo dia samy manana ny mekanika, ny fahavalo ary ny fandrika hamandrihana anao tsara. Azonao atao ny mahazo zavatra tsaratsara kokoa ary alao ny toetra mahafinaritra hanandramana hanatratra ny faran'ny tsirairay amin'ireo tontolo 10 miandry anao.
Ireo ady nataon'i Neo, mpiady mahery an'i Matrix, dia saika niseho tamin'io Ady maika izay mirehareha amin'ny fampanantenany antsika a karazana ady tena manokana izay hananantsika segondra hanambarana ny kapoka avy eo ankavanana kavia, mba tsy hamelantsika ny fahavalo hijoro ary ho mpandresy amin'izay ny ankamaroan'izy ireo manaikitra vovoka.
Tenisy Tap iray
Un lalao ara-panatanjahantena zavakanto pixel izay hampihomehy anao ny feon'ny mpandahateny. Lalao tsotra, fa iray izay misambotra ny rivotra iainana ny fanatanjahan-tena tenisy. Fifaninanana maro no miandry anao hanoherana ireo mpilalao rehetra manantena ny hitondra anao ho resy amin'ny kapoka mafy ataon'izy ireo. Raha mpankafy an'i Rafa Nadal ianao dia tsy azonao atao ny tsy mahita ny fotoana nifanarahana.
Videogame izay tsy maintsy ataonao asio lalamby ka mamakivaky azy ireo ary afaka mandray ny mpandeha izay alainy any amin'ny toerana halehany any amin'ny gara. Fomban-tsary Pixel fa mampatsiahy tokoa ny Làlana Crossy lehibe. Lalao video tena atolotra ho an'ny hakanton'ny manodidina azy sy ny lafiny fahitany azy.
El volombava sy volo tampoka ny mpilalao fototra amin'ny lampihazo, hampahatsiahy anao ny Super Mario ny fotoana voalohany hanombohanao ny lalao. Lalao mahazatra izay hampiasanao ny fitsambikinana indroa, fitifirana ary mekanika hafa hanandrana mandresy ireo ambaratonga izay miandry anao amin'ny lalao Retro lehibe hafa.
Elvin: Ny sehatry ny rano
Amin'ity sehatra ity Retro dia tsy maintsy mianatra ny andiana hetsika tokony hataonao ianao handresena ilay haavo natao ho an'ny tanana ary tsy novokarina kisendrasendra izy ireo. Toy ireo sehatra taloha ireo noho ny lesoka dia azonao atao ny mandresy ireo ambaratonga rehetra miandry anao. Lalao nataon'ny studio Espaniola.
Tsindrio Knight sy ny Castle maizina
Clicker izay tsy maintsy hitantananao miaramila mahery fo iray manontolo ary ny mpilalao fototra miditra amin'ny tranomaizina tsy manam-petra. Ao amin'izy ireo no ahitanao ny karazana fahavalo rehetra ary mila manatsara ny fitaovan'ny maherifo rehetra ianao hahafahanao mandeha lavitra araka izay tratranao.
Sehatra hafa Nitrome izay ny Misongadina bebe kokoa ny zavakanto pixel ary amin'ny maha endri-javatra tsara anao dia azonao atao ny miresaka momba ireo ambaratonga vaovao izay ampakarina isan'andro mba tsy hanananao tsy misy atiny amin'ity lalao mahafinaritra ity. Fanodinana mitsivalana ho an'ny hatsarana sary tsara misy ambaratonga maro loko.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Lalao video Retro 12 maimaim-poana navoaka tamin'ny 2016 izay tsy azonao adino